Fadeexada Dulhoganaysa Gudoomiyaha Komishanka Gobolka Awdal Mr. Faarax Ismacil Sidci Diirada Lughaya.com | Lughaya.Com
Fadeexada Dulhoganaysa Gudoomiyaha Komishanka Gobolka Awdal Mr. Faarax Ismacil Sidci Diirada Lughaya.com
Added by Adal on May 18, 2017.
Run ahaantii Indhuhu waa xubnaha ugu muhiimsan jidhka aadamaha waxana ay inoo suurta galiyaan in aynu wax ku aragno. Haseyeeshee indhaha laftoodu waxa ay leeyihiin dacfi weyn, waayo ma arkaan xafajada ama dhalxanta agtaala isha, hadaanad muraayad haysana qofka kuugu soo horeeya ee aad kulantaan ayuunbaa ku odhan.”Bal iska qaad xafajada.”, maamulkuna waa sidaasi oo kale qofkasta oo masuul ah dhaliil ayuu leeyahay aanu isagu arkayn. In uu isku dayo in uu daaha saaraana waxa ay ku keentaa in uu sii khashifmo, sidii dhawaan ku dhacday gudoomiyaha Komishanka Gobolka Awdal markuu isku dayay in uu ceebtiisa qariyo waxay u horseeday in bulshadu ogaato mustawihiisa aqooneed waayo aragnimo la aantiisa shaqada.
In la tilmaamo goldaloolooyinka masuuliyiinta dawladu waa habka ugu haboon ee lagu saxi karo shaqada iyo masuuliyada ay umada u hayaan .Dhaliishuna waxa ay nasteex u tahay masuulka hawsha waa hadii uu xaga wanaaga u qaato oo ay ka go antahay in uu adeega wanaajiyo.
Dhawaan markii ay ka bilaabantay gobolka Awdal Qaybinta kaadhka codbixinta doorashooyinka , waxa masuuliyiin ka tirsan xisbiga Kulmiye ee talada dalka hayaa ay ay ka biyo diideen hanaanka farsamo ee ay komishanka doorashooyinku u maamulayaan shaqada .Waxana ay eedaymo dusha uga tuureen masuuliyiinta komishanka qaranka. Hadaba waxa iswaydiin mudan dhaliilahaasi ma kuwo run ah bay ahaayeen mise male awaal ? Marka aad u kuur gasho ee aay ururiso rayiga dadwaynaha dhaliilahaasi waxa ay salka ku hayeen helitaanka kaadhka codbixinta ee muwaadinka. Qofka aad aragtaaba waxa uu ka cabanayay in uu kaadhkiisii goobtii uu iska diiwaan galiyay ka waayay, dadwaynaha boqolkiiba 90% waxa ay qirayeen in dhibaatooyinkaasi ay ahaayeen kuwo run ah oo jira. Sababo badan ayaa hadab jiray oo keeni karayay in uu qofku kaadhkiisii hore u heliwaayo marka uu goobtii uu iska diiwaan galiyay tego. Tusaale ahaan Somalidu magacooda kolba si ayay u qoraan mar waxa ay qoraan af ingriis marna Afsoomaali (Mohamed , Maxamed), badanka dadku warqadihii lasiiyay markii ay isdiiwaan gaiyeen iyaga oo aan sidan ayay goobtii tegayeen marka la waydiiyo magaciisana shaqaaluhu waxa ay ku daalayeen baadhida xarfaha iyo sida ay u kala horayso xuruuftu.
Waxa kale oo jiray shaqaalaha kaadh qaybinta oo arday dhalinyaro ku cusub shada ahaa kuwaasi oo dadwaynha qaar ay dhib kala kulmayeen,waxa iyana sababahaa ka mid ahaa in goobaha laftooda la kordhiyay oo goobtiiba sedex ama afar loosii kala qaybiyay taasi oo iyana keentay jaha wareer kale iyo waliba la qabsi la aan shaqaalaha aha. Dhamaan arimahaasi may ahayn waxa danbi ah oo komishanku galay ee shaqada oo inagu cusbayd ayaa dhibtan keentay waxana haboonayd uun markii masuuliyiinta dawladu tilmaameen in ay komishanku sharaxaan balana ay u qaadaan dadka in ay ku dadaalayaan sidii loo xalin lahaa.
Hadaba waxa aan la yaabay halkii uu Gudoomiyaha Komishanku sharaxaad waafiya dadwaynaha ka siin lahaa dhibaatadu xaga ay ka jirto waxa uu yidhi ” Badhasaabku waxa uu ka soo toosaa Hargaysa ee isaga xafiiskaaga halagaahelo ayaan leeyahay.” isaga oo cay ka dhigaya.
Waxa nasiibdaro noqotay qaabkii uu uga dareen celiyay, gudoomiyaha Komishanka doorashooyinka Ee Gobolka Awdal Mr.Faarax Ismaaciil Sidci eedaasi sugan ee maamulka gobolka, kan degmada iyo wasiiro ka tirsan xukuumaduba dusha ay uga tuureen Komishanka qaranka. Runtii jawaabaha uu ka bixiyay gudoomiye Faarax arintaasi waxa ay daaha ka qaaday qayb ka mid ah dulqaadkiisa, iyada oo muujisay waayo aragnimo la aantiisa kuwajahan ka warbixinta xaalada marka ay yimaadaan eedaymo run ah (Situational fact report). Waxa uu ku guul daraystay in uu xaqiiqada wajaho aqbalana eeda saxda ah.Waxa uu isku dayay in uu daboolka saaro dhibaatada farsamo xumo ee shaqaalihiisu ay ku hayaan adeega kaadh qaybinta oo qofkasta taabatay. Waxa uu markiiba aflagaado iyo cay kula kacay masuuliyiintii tilmaamay dhibta ee codsaday in ay komishanku shaqada wanaajiyaan si dadku kaadhadh kooda si fudu u helaan.Waxana uu gabi ahaanba baal maray jawaabihii dadwaynuhu ka rabeen komishanku in ay ka shaafiyaan .Tusaale ahaan dadku waxa ay rabeen in ay ogaadaan goobta uu kaadhkoodu yaalo balse jawaabtii masuulka u hadlay Komishanku hal qof oo kaliyana kama ay qancin dhibta ka haysata helida kaadhkiisa, hase yeeshee waxa ay muujisayuun kalsooni daradiisa iyo sida uu uga aradan yahay gudoomiye Faarax aqoonta maamulka iyo maaraynta.
Runtii waxa haboon qofka masuulka ahi in uu ahaado qof dhaliishiisa aqbali kara toosina kara, hase yeeshee dabeecadan ah in qofkii shaqadiisa ceebteeda la tilmaamay uu difaacul nafsi ku baabiinayo halkii uu ka saxi lahaa waxa ka qaldamay waa mushkiladaha ragaadiyay qarankan inta qaabkaasi ay masuuliyiinteenu uga falcelinayaan eedaha kuwajahan shaqadooda ma suurtoobi karto horumar laga gaadho habka maamulwanaaga iyo isla xisaabtanka lafdhabarta horumarka iyo nidaamka ah.